Bursa'da Yunuseli Havalimanı resmen açıldı | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaMadaarka Yunuseli waxaa si rasmi ah looga furay magaalada Bursa
Madaarka Yunuseli waxaa si rasmi ah looga furay magaalada Bursa
02 / 02 / 2017 16 Bursa, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Madaarka Yunusueli ayaa si rasmi ah looga furay Boosaaso: Madaarka Yunuseli Airport, oo lagu xidhay 2001 ka dib markii la furay Madaarka Yenisehir, ayaa dib loo furay degmada Boosaaso kadib markii 16 fasaxa ka jabtay. Duqa magaalada Recep Altepe, oo horey u ah milkiilaha diyaaradaha 60 ayaa sameeyey dalab ah in uu ka faa'iideysto Madaarka Yunuseli, 100 ee sanadka soo socda ayaa qaadan doona duulimaadka soo deynta iyo baxitaanka wuxuu gacan ka gaysan doonaa dhaqaalaha magaalada, ayuu yiri. Ku xigeenkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo kan degmada Bursa Efkan Ala ayaa sheegay in ay si buuxda ugu shaqeynayaan dib u furista garoonka diyaaradaha, taas oo ah mashruuca Degmada Metropolitan, "Sababtoo ah kama gudbi karno adeegga Bursa. Bursa, carqalad carqalad Turkey waxay ka dhigan tahay, in la yidhaahdo, "ayuu yiri.
Iyada oo ujeedadu tahay in magaalada Bursa lagu sameeyo magaala-weynta duulimaadka, dhismaha aerospace-ka ee Xarunta Tiknoolajiyada Sayniska, furitaanka waax la xidhiidha duulimaadka jaamacadda, oo ay ku qaadaan dadaal xoog leh oo soo saaraya diyaarinta duulimaadka gudaha, Madaarka Yunuseli ayaa duulimaadyadeedii dib u furay muddo ku dhowaad 6. gaartay gabagabadii shaqadiisa. Inkasta oo qandaraasyadii la saxiixay sanooyinkii hore ee furitaanka Maddaarka Yunuseli ee gaadiidka hawada ayaa la hakiyay sababo kala duwan sababo kala duwan awgood, Degmada Metropolitan ayaa raacday nidaamkii ugu dambeeyay ee ugu danbeyntii dhamaystirtay adeegyadii kaabayaasha ee garoonka ka dib markii ay ansixiyeen Agaasimaha Guud ee Duulista Rayidka, gaadiidka. Munaasabad ballaaran oo ka dhacday Garoonka Dayuuradaha ee Gemlik iyo Halic, wasiirkii hore ee wasaarada arimaha gudaha iyo wasiirka arimaha gudaha Bursa Efki Ala, gudoomiyaha Bursa Izzettin yare, xildhibaannada Bennur Karaburun iyo Ismail Aydin, duqa magaalada Osmangazi Mustafa Dundar, Root of Uludağ University Prof.Dr. Yuusuf Ulcay, Guddoomiyaha Gawriga Cafil Cemalettin Torun iyo tiro badan oo marti ah ayaa ka soo qaybgalay xafladda dib u furitaanka duulimaadyada.
Maalgashiyada gaadiidka mudnaanta leh
Duqa magaalada Recep Altepe ayaa sheegay in ay haysteen maalintii taariikhiga ah iyo in ay ku faani lahaayeen furitaanka madaarka Yunuseli Airport, kaasoo ahaa filashada sanadada. Duqa magaalada Boorama wuxuu uga mahad celiyay wasiirrada, xildhibaannada iyo madax-dhaqameedyada taageeray dib u furista garoonka. ayaa la xusay. Waxay leeyihiin oo kaliya in la furo Boulevard u dhow expropriate dhismaha 70, waxaa ka dhigi kartaa degmo kale in Madaxweynaha Altepe hoosta ka xariiqay in dalka Turkiga, "In aannu mar keliya 500 buundooyinka iyo isgoysyada laga dhigay. Tareen iyo mareenada ayaa la dhisay. Waxaan u tagnay hindisada mashaariicda si ay u soo dejiyaan gaariga telefoonada ee u soo galaya hoteelada magaalada. Waxaan u isticmaali karnaa dhulka, hawada iyo badaha
Waxay noqon doontaa xarunta duulimaadka
xirriirka degaanka Bursa ee gobollada dariska ah ee soo socota si ay gaadiidka sidoo kale waxaa ah Kitaab muhiim Altepe Madaxweynaha xusuusiyey in Turkey ayaa boqolkiiba dhaqaalaha ee 40 la xidhiidha Istanbulite bilaabay in ay sii xoojiso waqti BUDO ee sanadka 1,5 milyan oo qof oo u dhaqaaqay. Duqa magaalada Boorama ayaa sheegay in gaadiidka hawadu ay muhiimad weyn u tahay isku xirka dhow ee Istanbul iyo Bursa. "Diyaaradeennu waxay ka duuleen badda si badda. Waxaanu ku dhajinay diyaarado, laakiin wax dhul ah ma haysan. Hadda waxaan leenahay fursadan. Diyaarad kasta oo ku socon kara mitirka dhererka 1400 ayaa awoodi doona inuu isticmaalo. Meelaha safarrada ee Estuary hadda waa la samayn doonaa. Ma aha oo kaliya Geeska Dhexe laakiin 3. Waxaa jiri doona xiriirka madaarka. Garoonka caalamiga ah ayaa sidoo kale la dhisi doonaa. Diyaaradaha duulimaadka caalamiga ah ayaa la soo saari doonaa halkan. Waad ka kici kartaa halkan oo aad sii wadi kartaa duulimaadka caalamiga ah ee Istanbul. Garoonka diyaaradaha ee Yunuseli maahan mid meel u dhow. Bursa waxay taageeri doontaa duulimaadka waxaanay awood u yeelan doontaa in ay tagto maddaarka Yenişehir. Halkan 1 wuxuu ka fogaan doonaa 100 sanadka. Horeba 60 ayaa dalbaday inay adeegsato halkan. Waxaa jiri doona tababbarro tijaabo ah, dhammaan noocyada hawlaha duulista, dayactirka baabuurta iyo qalabka. Gaaban, tani waxay noqon doontaa xarunta duulimaadka ee magaalada Bursa.
"Carqalad Bursa, odhan dhaawac Turkiga"
Wasiirka Arrimaha Gudaha hore oo adkeeyay muhiimada ay leedahay waayo-xigeenka Bursa Ejkar Ala in Bursa Turkey, gobolka Bursa ee Turkey, oo ka mid ah xnumx'ünc ugu horeysay 5 badan ixtiraam show xusay in marka la eego tilmaamayaasha ugu. Isagoo hoosta ka xariiqay in Bursa uu ka qiimo badan yahay macaamil ganacsi marka loo eego wadamo badan oo adduunka ah, Ala ayaa yiri, "Goobaha Ganacsi ee Booska oo keliya ayaa ka sarreeya wadamo badan oo ka tirsan Qaramada Midoobay. Bixinta adeegyada magaaladan ayaa ah sharaf weyn iyo masuuliyad weyn. Xaruntan, oo aan ka furtay, ayaa soo baxday sababtoo ah sida fahamka masuuliyada. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Duqa Magaalada Metropolitan si aan u siino adeega noocan oo kale ah Bursa, qurux badan iyo wax soo saar leh. Tani waa mashruuciisa. Waxaan cadeynay in garoonka diyaaradaha ee loo adeegsanayo sidan oo kale ay wax weyn ka tareyso, waxaanu diyaarinay kaabayaasha waxaananu ogaaday in ay iskaashanayaan. Kama gudbi karno khalkhalka adeegga Bursa. Sababta oo ah curyaaminta ah ee hab Bursa, ku xirid Turkiga. Turkey si degdeg ah umuuruhu. Muxuu yahay? Bursa, Adana, Diyarbakir ayaa la horumarin doona.
Waxaanu fureynaa madaarka siyaasadeed
2023 diirada Turkiga, 2071 aragga si loo soomo, in ay si deg deg ah ugu shaqeeyaan, caqabad kaliya ee soo koraya Al sheegaya in ay sameeyaan garoomada jirka awood, ayaa yiri:
"Hadda waxaan kuu keeneynaa mashruuc madaarka siyaasadeed; Dib-u-habaynta dastuur cusub. Dib-u-habaynta dastuurka cusubi micnaheedu waa samaynta madaarka siyaasadeed. Dabcan, waxaanu dardar gelinaynaa waddo, jidka tareenka ah, waannu ka dhignay, waxaannu u jirnay meel fog. Laakiin kuma filna. Waxaan leenahay dad ku saabsan 80 million dadka sugaya wax badan oo dheeraad ah. Waxaan leenahay juqraafi ku filan, Balkaan, Caucasus, Bariga Dhexe, geeska adduunkoo dhan waa inay u adeegaan dadka sugaya adeegga. Waa inaan ka saarno caqabadaha aan loo baahnayn ee siyaasadda iyo adeegga. Waxaanu soo bandhigi doonaa isbeddel dastuur cusub ah oo soo jeediya isbedel nidaam. Waxaad raaci kartaa jidka, baska, baabuurka, sidoo kale hawada. Duulimaadku waa mid gaaban oo fudud. Waxaan keeneynaa isbedelka na siinaya fursad aan ugu adeegno si deg deg ah. Waxaan rajeynayaa in dalkeenu sugayo ansixinta. Ka dib markaad ogolaanshahan bixiso, waa in la yiraahdo 'haa', dabcan, go'aan kasta wuxuu leeyahay meel madaxeena. Si kastaba ha ahaatee, dalkeennaba had iyo goor way ka danbeeyeen mashaariicda jidka loo mariyey. Waxaa la rabaa in la geeyo masaafada ugu fog. Waxaan soo bandhigi doonaa isbedelka aan dhihi karo waxaan run ahaantii samayneyno madaarka siyaasadeed. Faahfaahinta waxaa lagu sharxi doonaa wax badan. Haddii aad ku tiraahdo ereyga oo lagu soo koobay kelmad hal eray ah, isbeddelkan dastuurku wuxuu noqonayaa magaca adeega si dhakhso ah. Sababtoo ah waxaan u baahanahay. Sababtoo ah waa inaan xirnaa farqiga u dhexeeya dalalka horumaray. Waa inay si dhakhso ah u dhaqmaan si ay u sameeyaan dhoofinta dhoofinta. Shaqo kasta oo aan sameyno waa rabitaanka ah in aan adeegyo dheeraad ah u fidino qarankeena waqti yar. "
Magaaladu waa tartamayaan
Guddoomiyaha Boosaaso Izzettin Kucuk, oo maanta, iyo sidoo kale tartan u dhaxeeya wadamada, isaga oo xusaya in tartanka magaalooyinka, magaalooyinka caalamka ay tartamayaan, ayuu yiri. Yoonis wuxuu sheegay in magaaladu ay tahay mid xoogan, xiriirka ay la leedahay magaalooyinka kale, gobollada iyo waddamada kale waa inay sarreeyaan dareen kasta. Halkan waxaa lagama maarmaan ah in aad haysato noocyo kala duwan oo gaadiid ah. Garoonka diyaaradku waa talaabo muhiim ah oo ku wajahan sidii magaalo caalami ah. Garoon diyaaradeed oo ku yaalla bartamaha magaalada. Waxaan ka shaqeeyey gobollo badan mana jiro fursaddan oo kale. Mid ka mid ah cabashooyinka ugu muhiimsan waa in garoomada diyaaradaha ay daqiiqado ka fog yihiin magaalada 30-40-50. Madaarka bartamaha magaalada waa mid xiiso leh. Adeeg qiimo leh, qiimo leh. Waxaan si daacadnimo ah ugu mahad celineynaa madaxweynahayaga si aan u furano adeeggan wax yar ka dib ansixinta. "
Duqa magaalada Osmangazi Mustafa Dündar wuxuu sheegay in Madaarka Caalamiga ah ee loo yaqaan 'Yunuseli Airport', oo sidoo kale loo furay adeegga, sidoo kale wuxuu noqon doonaa xarunta tababarka wuxuuna gacan ka geysan doonaa horumarka garoonka diyaaradaha ee Yenisehir wuxuuna uga mahad celiyay kuwa ka qayb qaatay.
Ka dib xafladdii furitaanka, Madaxweynaha Boondheere iyo xubno ka mida golaha ayaa ka socda safar gaaban oo ka socda hawada iyada oo la raacayo diyaaradihii ugu horeeyay ee ka soo degay Maddaarka Yunuseli.
16 sanadka oo dhan wuxuu ku dhamaanayaa Madaarka Yunuseli
Garoonka diyaaradaha ee Turkiga
Warshadaha duulimaadka ee Bursa
Tareenka Samsunda wuxuu bilaabay inuu mar labaad u adeego